Google AdSense နဲ့ငွေဘယ်လောက်ရနိုင်လဲ? - Learn Expert Blogging
Google AdSense နဲ့ငွေဘယ်လောက်ရနိုင်လဲ?
သင်အလွယ်တကူထံမှဘာမှဝင်ငွေနိုင်ပါတယ် 50 ဒေါ်လာ 1000+ Google AdSense မှတစ်ရက်လျှင်ဒေါ်လာ. ဒီရည်မှန်းချက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအောင်မြင်ရန်, သင့်လျော်သောမဟာဗျူဟာအကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်အသွားအလာရှိသင့်တယ်.
Google AdSense သည် Google ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်. ဂူဂဲလ်မှတစ်ဆင့်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကုန်သည်ရဲ့ကြော်ငြာကြော်ငြာများကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာ. လူထုကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်သူတို့ကဂူဂဲလ်ကိုပေးသည်။
Google ကကြေညာသူတွေကိုသူတို့ရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှာကြော်ငြာတွေပြသခွင့်ပေးပြီးဂူးဂဲလ်ကိုပြန်ပေးတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကကြော်ငြာကိုနှိပ်လိုက်ရင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်ကဝင်ငွေရတယ်။.
အင်တာနက်ပေါ်တွင်သန်းနှင့်ချီသောဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိသည်. သူတို့ထဲကထဲက, အများအပြားကောင်းသော or ည့်သည်ရဲ့နေ့စဉ်ရှိသည်.
ဒီနေရာမှာဂူးဂဲလ်ဟာအလယ်အလတ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသည်. သင့်တွင် WordPress ကဲ့သို့ကိုယ်ပိုင်စီစဉ်ထားသော platform ရှိပါက, က 30% ဝင်ငွေရဲ့အစိတ်အပိုင်း Google ကိုသွားသည်, နှင့်ကျန် 70% မင်းရဲ့ဥစ္စာ.
သို့သော်ငြားလည်း, သင်ကဂူဂဲလ်ကိုယ်ပိုင် blogging platform blogger.com ကိုသုံးနေတယ်ဆိုရင်, ဤကိစ္စတွင် Google ကစောင့်ရှောက် 40%.
သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့မည်မျှလည်ပတ်သည်နှင့်အမျှခက်ခဲ။ မြန်ဆန်သောစည်းမျဉ်းမရှိပါ, AdSense မှတဆင့်သင်ငွေမည်မျှ ၀ ယ်နိုင်သည်? ၎င်းသည်သင်မည်သည့်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ရေးသားနေကြောင်းအချက်ပေါ်တွင်လုံးဝမှီခိုသည်.
ပိုပြီးရှင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း, ယေဘုယျအားဖြင့်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံနှင့်သက်ဆိုင်သောဝေါဟာရများသည်ကလစ်တစ်ချက်လျှင်မြင့်မားသည်. စသည် 1 ရန်2ဒေါ်လာနှင့်အလွယ်တကူပင်တတ်၏ 50 ကလစ်တစ်ဒေါ်လာ. ဆိုလိုသည်မှာအချို့သော visitors ည့်သည်များသည်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့လာရောက်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်, သင်၏ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ကြော်ငြာကိုနှိပ်ပါ, မင်းရပါလိမ့်မယ် 70% စုစုပေါင်း CPC ၏, နှင့်ကျန် 30% Google ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာ.
ဥပမာ, လူများစွာသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေနေကြသည်ကိုသင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည် “ဆံပင်အစားထိုးကုသမှု”. သင်သည်ဤအထူးသခေါင်းစဉ်အပေါ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးလျှင်. သင် CPC အလွယ်တကူလှည့်ပတ်သွားတွေ့ပါလိမ့်မယ်7ရန် 10 ကလစ်တစ်ဒေါ်လာ. သင် the ည့်သည်များအနေဖြင့်ကလစ်ကောင်းတစ်အရေအတွက်ရရှိပါက, သင်အလွယ်တကူန်းကျင်စေနိုင်သည် $50 တစ်နေ့လျှင်.
သို့သော်ငြားလည်း, ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေ, ငါအသိပညာနှင့်အတူကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးခရီးစတင်ခဲ့သည့်အခါ, ငါကအကြီးမားဆုံးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ခဲ့သည်သတိရပါ. The reason because I wrote articles on the topic with no CPC. ကုန်သည်များသည်ပရိသတ်ကိုပစ်မှတ်ထားသည့်ကျွန်ုပ်ရေးသားခဲ့သောသော့ချက်စာလုံးကိုမပေးချေပါ. ဒေသခံကဗျာအကြောင်းပါ. သငျသညျဆက်ဆက်ဤအခိုက်မှာရယ်မော. ငါအခြေခံအားဖြင့်ကကောင်းတစ် ဦး အသိပညာရှိသည်ပေမယ့်သင်အချို့ကောင်းသောငွေသို့ပြောင်းလဲကြဘူးလျှင်အဘယ်သူမျှမအကျိုးခံစားခဲ့ရသည်.
ငါနီးပါးရေးသားခဲ့သည် 50 ပေါင်းဆောင်းပါးများအကြာတွင်ငါထက်ပို၏ဝင်ငွေကိုထုတ်လုပ်မပေးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်5တစ်လဒေါ်လာ. အဆိုပါစိတ်ပျက်စရာစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကိုသော့ချက်စကားလုံးဘယ်လောက်ပေးသလဲဆိုတာမင်းကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာငါမသိခဲ့လို့ပါ. ဒါဘာမျှမပါလျှင်, ဒါဆိုရင် Google AdSense ကနေငွေကောင်းကောင်းမထုတ်ပေးတဲ့အတွက်အဲဒီသော့ချက်စာလုံးကိုသင်ထားခဲ့ရမယ်.
ငါကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကနေအကြံပြုအပ်ပါသည်, စာမူတပုဒ်မရေးခင် CPC သော့ချက်စာလုံးကိုရှာသင့်တယ်. သင်ရေးသားရန်ဗဟုသုတများစွာရှိသောသင်သော့ချက်စာလုံးသုတေသနကိုရှာဖွေပါ 100 + ဆောင်းပါးများတဖြည်းဖြည်း. အကယ်၍ သင်သည်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုစတင်သော်လည်းသင်၌ဗဟုသုတများစွာမရှိလျှင်၎င်းသည်သင်မကြာမီအဆုံးသတ်တော့မည်ကိုဆိုလိုသည်.
ဖတ်ရမယ်: ၀ င်ငွေကောင်းကောင်းရနိုင်သော Blog ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုမည်သို့တည်ဆောက်ရမည်နည်း
ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်ရေးသူများသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်မြန်နှုန်းကိုဂရုမစိုက်ပါ. သူတို့အမှားပဲ. ဂူဂဲလ် AdSense မှ ၀ င်ငွေရနေစဉ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မြန်နှုန်းသည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်ကိုသူတို့သတိထားရမည်.
သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်မတူညီသောအရွယ်အစားကြော်ငြာကြော်ငြာစာတန်းများကိုပြသခြင်းဖြင့်သင့်အား ၀ င်ငွေရှာရန် Google AdSense ကကူညီသည်. သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်လည်ပတ်သည့်အခါ၎င်းသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်နောက်ကွယ်ရှိကုဒ်နံပါတ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်. Script ကုဒ်သည်အချိန်တိုင်းအလုပ်လုပ်ပြီး website ဖွင့်ချိန်ကိုလျော့နည်းစေသည်.
ယေဘူယျအားဖြင့်, အချိန်အတွင်း၌ဖြစ်သင့်သည်2ရန်3စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းပေမယ့်သင် script ကို install လုပ်သည့်အခါ, ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုစတင်ယူပါတယ် 10 ရန် 15 ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖွင့်လှစ်ရန်စက္ကန့်. အဲဒီအခြိနျမှာ, အသုံးပြုသူသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာမနေလိုပါ. သူတို့က back ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ, ပြန် bounce, နောက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုသွားပါ.
ထိုအခါ, ဘယ်လိုငွေရှာနိုင်မလဲ? visitors ည့်သည်များသည်သင်၏ website ကိုမသွားဘူးဆိုရင်. သူတို့ကအနီးစပ်ဆုံးအချိန်အတွင်းဘာမှမမြင်ကြဘူး. ဤသည်သေချာပေါက် Google AdSense မှတဆင့်ဝင်ငွေဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါတယ်.
ဒါအတွက်, သင်မြန်ဆန်စွာတင်နေသော hosting လိုအပ်သည်, ဆာဗာ၏တုန့်ပြန်မှုကောင်းမွန်သည်. ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ Bluehost သည်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသည်. ဒီသာမကဒါပေမယ့်လည်း, သူတို့ကဲ့သို့အပိုဆောင်း features တွေကမ်းလှမ်းနေကြသည် SSL လက်မှတ် ဂူဂဲလ်အဆင့်တွင်ယနေ့နှင့်အနာဂတ်တွင်အဓိကအခန်းကဏ္ playing မှပါ ၀ င်သောအရာများသည်ပိုများသည်.
Affiliate Marketing နှင့်ငွေရှာရန်ခက်ခဲသည်?
Previous PostAffiliate Marketing နှင့်ငွေရှာရန်ခက်ခဲသည်?
Next PostAdSense နဲ့တွဲဖက်တဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုသင်လုပ်နိုင်သလား?